अस्थिरता हटाउन वाम गठबन्धनलाई मतदान | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / अस्थिरता हटाउन वाम गठबन्धनलाई मतदान
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता November 27, 2017	0 94 Views
निर्वाचन क्षे त्र नं. ३ (१) का उम्मे दवार
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदे श सभा निर्वाचनको पहिलो चरणको मतदान हिजो सकिएको छ । अब दो स्रो चरणको निर्वाचन मंसिर २१ मा हु“दै छ । त्यसका लागि दाङमा पनि चुनावी गतिविधि भइरहे को छ । भे ला, आमसभा, घरदै लो लगायतका कार्यक्रम भइरहे का छन् भने उम्मे दवारहरुलाई मतदाता रिझाउन भ्याइनभ्याइ छ । यसै सन्दर्भमा दाङ निर्वाचन क्षे त्र नं. ३ प्रदे शसभा १ का वाम गठबन्धनका उम्मे दवार जगप्रसाद शर्मा अपारस“ग युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा“ प्रस् तुत गरिएको छ । –सम्पादक
चुनावी कार्यक्रम के छन् ?
चुनावको प्रचार प्रसारलाई हामीले घनीभूत र व्यापक बनाएका छौ ं । यो दाङ निर्वाचन क्षे त्र नं. ३ अन्तर्गत प्रदे शसभा १ मा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका ११ वटा वडाहरु पर्दछन् । एघारवटै वडामा एक चरणको चुनावी प्रसार र तयारीको कामलाई लिएर हामी पुगिसके का छौ ं । सबै ठाउ“मा जनताको सहभागिता उत्साहका साथ भएको मै ले पाएको छु । चुनावी तयारीका लागि गनेर् आन्तरिक कामलाई पनि हामीले व्यवस् िथत गरे र अघि बढाएका छौ ं । संयुक्त वाम गठबन्धनको पक्षमा एक प्रकारको जनलहर नै दे खिएको छ ।
मत माग्ने तर कसरी मतदान गर्ने सिकाउनु भो ?
हामीले यो काम पनि चुनावी कार्यक्रमस“गस“गै लगे का छौ ं । मुख्य कुरा मतदाता शिक्षा नै हो  । यसलाई हामीले हरे क चुनावी कार्यक्रममा गनेर् गरे का छौ ं । भे टघाट, घरदै लो , को णसभामा पनि हामीले व्यानरमै राखे र मतदाता शिक्षा दिइराखे का छौ ं । यसपालि तीनवटा मतपत्रमा चार ठाउ“मा छाप लगाउनुपनेर् छ । यो अप्ठे रो जस् तो लागे पनि यी तीनवटा मतपत्र छुट्टाछट्टै हुने भएकाले सजिलो पनि छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदे श सभामा थो रै चिन्ह छन् । वाम गठबन्धनको तर्फबाट त झन जुन पार्टीको उम्मे दवार हो उसको मात्रै चुनाव चिन्ह भएकाले सजिलो भएको छ । समानुपातिकमा धे रै चिन्ह भएर के ही झञ्झटिलो जस् तो दे खिए पनि पार्टीका चिन्ह अनुसार छाप लगाउने हो भन्ने कुरालाई हामीले मतदाता शिक्षामार्फत सजिलो बनाएका छौ ं ।
जनताले के भन्छन् उम्मे दवारलाई ?
मतदाताहरुको र हाम्रो संयुक्त वाम गठबन्धनको कुरा एउटै छ अहिले कि हामी लामो समयदे खि संघर्षका माध्यमबाट अधिकार प्राप्तिको आन्दो लन चलाएर यो ठाउ“सम्म आएका छौ ं । नया“ संविधान बन्यो , राज्यको पुनर्संरचना भयो  । संयुक्त वाम गठबन्धनको संकल्प र जनताको इच्छा चाहि“ एउटै छ अहिले  । जनताको इच्छा र वाम गठबन्धनको संकल्प भने को जनतामा खुशी ल्याउने , राष्ट्रमा समृद्धि ल्याउने , राजनीतिक क्रान्ति एकहदसम्म पूरा भइसके को छ । अब दे शमा आर्थिक क्रान्तिको अभिभारालाई पूरा गनेर् हो र जनताको तहमा आउ“दा विकास निर्माणका पूर्वाधारहरु तयार पानेर् , शिक्षा, स् वास् थ्य र रो जगारीका जुन समस् याहरु छन् त्यसलाई समाधान गनेर् लगायतका कुरा नै जनताको चाहनाका रुपमा आएका छन् । त्यो चाहनालाई पूरा गर्न नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धताहरु पनि अघि सारे का छांै  । जनताको चाहना र हाम्रो संकल्पको एकता भएको छ ।
सबै ले त्यही त । भन्छन् नि । चुनावको बे लामा ।
चुनावको पूर्वसन्ध्यामा आएर सबै ले यस् तै कुरा गर्छन् तर फरक के हो त भन्दा अरुले कुरा मात्रै गर्छन् हामीले जुन संकल्प, उद्दे श्य छ त्यसलाई पूरा गछौर् ं । व्यवहारमै काम गरे र दे खाउ“छांै  । अरुका कुरा मात्रै हुन । हाम्रो काम हो । हामीले पूरा गर्छांैर्  । यही फरक हो
पहिलो कुरा । अकोर् भने को इतिहास पनि साक्षी छ । हामीले जे बो ल्यौ ं त्यो पूरा गरे रै यहा“सम्म आएका छौ ं । हामीले मौ का पाउ“दा जनतालाई जे भन्यौ ं, त्यो गरे र दे खाएका छांै  । हिजो पञ्चायत फाल्छौ ं भन्यौ ं, फाले र दे खायौ ं । हामीले सामन्तवाद, राजतन्त्र फाल्छौ ं भन्यांै त्यो पनि हामीले पूरा ग¥यौ ं । हामीले संविधानसभाद्वारा यो राज्यको पुनर्संरचना गदैर् नया“ संविधान ल्याउ“छौ भन्यौ ं त्यो पनि पूरा गरे र यहा“सम्म आइपुगे का छौ ं । र अहिले हामीले के भने का छौ ं भने यो दे शमा आउ“दो पा“च वर्षमा दशकौ ंदे खि गर्न नसके का विकास निर्माण र जनताका समस् या समाधान गनेर् हिसाबले
पूरा गछौर् ं  । यही प्रतिब्द्धता लिएर जनतामा पुगे का छौ ं । अरु र हामीमा यही फरक हो  । त्यो प्रतिबद्धता हामी भो लि पूरा गरे र दे खाउ“छांै  ।
तपाइ“लाई नै किन भो ट दिने ?
पहिलो कुरा म व्यक्ति मात्रै हो इन । मे रो उम्मे दवारी वाम गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मे दवारी हो  । अकोर् कुरा वाम गठबन्धनले जुन नीति, नारा र एजे ण्डा ल्याएको छ, ती एजे ण्डा राष्ट्र हितमा छन् । त्यसकारणले मलाई भो ट दिनुहुने छ । खासगरी वामपन्थी गठबन्धन छ यसले दाङमा प्रादे शिक राजधानीको कुरा
अघि सारे को छ । यो मिसनलाई पूरा गर्न पनि मलाई भो ट दिनुहुने छ । यसै गरी यो दे श जसरी अस् िथरताको शिकार हु“दै आएको छ,
यो अस् िथरतालाई सदाका लागि अन्त्य गर्न मलाई भो ट दिनुहुने छ । यसै गरी मे रो निर्वाचन क्षे त्र तुलसीपुर के न्द्रित छ । तुलसीपुरलाई स् मार्ट सिटी बनाउन, यसलाई एउटा व्यापारिक हबका
रुपमा विकास गर्न, तुलसीपुरमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्न र यहा“का नदी, खो लाहरुमा तटबन्ध निर्माण गर्न, बसपार्कलाई आधुनिकीकरण गर्न, चक्रपथ निर्माण गरी यसक्षे त्रको मुहार बदल्नका लागि मतदाताहरुले मलाई मतदान गर्नुपर्छ । मलाई आशा छ मतदान गर्नुहुने छ ।
तपाइ“का प्रतिस् पर्धी मन्त्री नै हुनुहुन्छ, । विकासै गर्न त पदमा बस् या मान्छे ले पो गर्ला नि ?
त्यो के गर्नुभयो तपाइ“ले पत्रपत्रिकामा दे खिसक्नु भयो  । सञ्चारमाध्यममा पनि सुनिएकै छ नि । मानव तस् करलाई जो गाउन लागे को कुरा हप्तादिन भन्दा बढी भएको छै न । त्यति मात्रै हो इन, ने पाली कांग्रे सले पटक–पटक दे शमा बहुमत पाएको हो  । उसले के ही गर्न सके न इतिहास साक्षी छ । अकोर् कुरा मे रा प्रतिस् पर्धी पा“च वर्ष सांसद हुनुभयो , मन्त्री पनि हुनुभयो उहा“ले यो गाउ“ र जनताका निम्ति के गर्नुभयो ? त्यो पनि इतिहास साक्षी छ । ने पाली कांग्रे सले मौ का पाउ‘दा पनि के ही गर्न सके न । अब पालो वामपन्थीहरुको हो  । स् थानीय सरकारदे खि के न्द्रसम्म तीनवटै तहमा वामपन्थीको सरकार बन्ने निश्चित जस् तै छ । त्यसकारणले वाम गठवन्धनको तर्फबाट मलाई अघि सारिएको छ । यहा“का जनताका समस् या समाधान गनेर् इमानदारिता, भिजन र इच्छाशक्ति मस“ग छ, प्रतिबद्धता पनि छ । यसर्थ यहा“का नागरिकको विकासको आवश्यकतालाई मै ले नै पूरा गर्न सक्ने भएकाले मत पनि जनताले मलाई, वाम गठबन्धनका सबै उम्मे दवारलाई नै दिनुहुन्छ ।
दाङ राजधानी हुन्छ त ?
हुन्छ किन नहुने ? मलाई लाग्छ अब घो षणा गर्न मात्रै बा“की छ । चुनावपछि वामपन्थीहरुको सरकार बन्छ त्यसले दाङलाई पा“च नंं. प्रदे शको राजधानी घो षणा गर्छ । प्रहरीको प्रदे शस् तरीय कार्यालय दाङमा आइसके को छ । उच्च अदालतको प्रदे श कार्यालय पनि तुलसीपुरमै छ । अन्य विभिन्न कार्यालय स् थापनाका प्रक्रिया पनि अघि बढिसके का छन् । दाङ राजधानी बन्ने कुरा धे रै अगाडि बढिसक्यो । अब पछि फर्किने अवस् था नै छै न ।
अन्त्यमा, मतदातालाई थप भन्नु पनेर् के ही छ ?
म आदरणीय मतदाता दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुवाहरुमा के अनुरो ध गर्न चाहन्छु भने मंसिर २१ गते हुने चुनाव विगतको जस् तो हो इन । विगतको निरन्तरता पनि हो इन । यो दे श बनाउने , राष्ट्र बनाउने , दे शमा व्याप्त अस् िथरतालाई सदाको निम्ति अन्त्य गनेर् , यो दे श भ्रष्टाचारको चंगुलमा फसे को छ, त्यसलाई विदा
गनेर् । अन्त्य गनेर् र भावी नया“ पुस् ता र पिढीको लागि नया“ इतिहास रचना गनेर् एउटा महान चाड र उत्सव हो  । यसमा कतै लो भ लालच, डर त्रासमा नपरिकन दृढतापूर्वक दे श बनाउनका निम्ति आम मतदाताहरुलाई म अपिल गर्न चाहन्छु ।
Previous: गुठी जग्गाको उपयोग अधिकार र चुनौती
Next: तीन तहको सरकारको आर्थिक भार जनताले उठाउन सक्दैनन्